အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: September 2009
ချိုကုပ်ဒူးဂျီးကြီးထံ သတင်းပေးပို့ အစီရင်ခံစာ
ဒေါသတွေ သိပ်မပြင်းပါနဲ့ 
စိတ်တော့ အားတင်းပါ အဘ..
တော်ကြာ နတ်ရွာစံ မာလက သွားဦးမယ်။
ကျနော်တို့လက်မရွံ့ အသေခံသမားတွေပါ..
မိုးသီးဇွန် မှာသာ..အ၀ှါ ရှိ…
ကျနော်တို့ မယားတွေ မုဆိုးမဖြစ်နေပြီပေါ့အဘရယ်..
ပစ်ခံရတဲ့ အီတလီ မိတ် ရှူးဖိနပ်တဖက်..
၀န်ကြီးသာဖြစ် ကျနော် မစီးဖူးပါဖူး
တစ်ဖက်ထဲမို့ သာ ကောက်မလာဖြစ်တာ.
၂ ဖက်သာဆို အတော်ဘဲ
နောက်တခါ UN အစည်းအဝေးတက် ၀တ်လို့ ရတယ်။
အလကား ဖိနပ်အကောင်းစားရ နည်းလား..
နအဖ ဆိုတာ အလကားရမှာ အကုန်ဝါး..
Mr Creator ပက်တာတဲ့
ကျနော့ အသဲစွဲ ကော်ဖီပေါ့
ခုထိ တောင် ကော်ဖီနံ့ လေးရသေးတယ်..
လက်ခုံပေါ်က လာစင်တဲ့ အစအနကလေးကို ရက်
နအဖ ငတ်ကြီး ဒီလောက်ကျတာ သိမှပေါ့
နှမြောစရာ… ကျနော့ တိုက်လိုက်ရင်ပြီးရောဗျာ..
ဖိနပ်ကြီးလာတာ ကြောက်ရွံ့ မျက်စိမှိတ်..
TV သမား ရှေ့တည့်တည့်
မဲနေတဲ့ ကျူပ်မျက်နှာ မရိုက်မိပါစေနဲ့ 
ထိုင်ဖုံပေါ်မှာ..မိန့် မိန့် 
ဂျိမ်းစ်ဘွန်း action လောက်တော့ အပျော့
ပြောင်ကြီးကတော့ ကားထဲ မြော့မြော့ရယ်
အမွှေးမရှိတဲ့ ငယ်ထိပ်ကို ယပ်ခတ်
မီးမကင်ဆေး တိုက်လိုက်မှ အတက်ကျတယ်..
ကျနော်လား..အော် ဘယ်ရမလည်း အဘရာ..
ကြက်ဥပုပ် ညာဘက်လာ ဘယ်ဘက်ရှောင်
ခရမ်းချဉ်သီးပုပ် မထိအောင် အသက်အောင့်ရှောင်
ဒီအပုပ်တွေ လာမှ သိပြီးသား အသေအချာ
ငုံ့ ရှောင် ခုန်ဆွ..ကုန်းကွ ထိုင်ချ
နအဖ မှာ လူရာဝင်ချင်..
ရှောင်နည်း..လိမ်နည်း ပုပ်နည်း တတ်မှရတယ်။
ဘယ်သူ မယုံယုံ..ပီအောင်သာ လိမ်ယုံဘဲ..
ဆန်ရှင် ပြန်ဖွင့်..ကျုပ်တို့ ကောင်းစားခွင့်ချည်းဘဲ..
ရရ မရရ..အဆုံးမှ မရှိ
ရှေ့ တန်းတိုက်စစ်မှူး ကျနော်နဲ့ ပြောင်ကြီးရှိတယ်..
၁၆၀ ကျော်ရုံလေးဘဲ ဖြစ်တာပါ။..
အဘ ဖို့ ဆို..
ကျနော်တို့သေချင်သေပါစေဗျာ..
တံတွေးထွေးတာ ကျည်ဆန်လို အသက်မထွက်ပါဘူး..
ဘဲဥပုပ်စော်နံ့ရန်ကုန်အမှိုက်ပုံလောက်အနံ့ မဆိုးသေးပါဘူး။
ကျနော်တို့ပြန်မရောက်ခင်..
ကျနော်တို့ ရဲ့ ပြုံးနေတဲ့ ဓါတ်ပုံပြ..
ကျနော် ဂျင်ဝက်ကို ကျောက်ပြ လာဘ်ထိုးနှင့်မယ်။
အ၀ှါ ဆိုသည်မှာ..လက်နက်ခဲယမ်း ကို ဆိုလိုပါသည်။
ဒီနေ့ ဆို နှစ်နှစ် တင်းတင်းပြည့်ပြီပေါ့..
သူ ဖြုတ်ချည်း ပျောက်သွားခဲ့တာ..
မနေ့ တနေ့ ကလိုဘဲ လို့ ထင်တယ်။
စက်တင်ဘာမိုးပေါက်နဲ့အတူ
လမ်းမပေါ် ပျောက်သွားတဲ့ ကလေးရယ်။
ကျမကို လာဆက်သွယ်လာတဲ့ ရဲဘော်တစ်ဦး
တောင်ပန်ကျိုးဌက် တဲ့ သူ့အမည်ဝှက်
အင်တာနက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း သတင်းပေးဖက်
ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက် လို့ သူဆိုပါတယ်..
ကျနော်တို့လူငယ်တွေ အတွက်..
လုပ်စားဖို့ကျန်တာ..
ဈေးဖိုး မရှိ..စွမ်းအားရှင်လုပ် လူရိုက်စား..
ဘွဲ့ ရလည်း အလုပ်မရ..
အသက်စွန့် မှ လွတ်လပ်ရေးရမယ်ဆို..
ကျနော်ဖြစ်ချင်တယ်…လှို့ ဝှက်ရဲဘော် အမှတ် (၁) "
နာဂါအိကို ပစ်သတ်တဲ့နေ့ က..
ဆူးလေ ဘုရားလမ်းပေါ်မှာ သူရှိတယ်.
ရှိစုမဲ့ မုန့် ဖိုးလေးကိုရင်း
မြို့ တော်ခန်းမထဲမှာ..ရဲကားတွေ အချူပ်ကားတွေ
နာကာအိ ကို ထိတဲ့အခါ..အရင်ဆုံး သတင်းပေးတာသူ..
ထိသွားတာ ကိုရီးယား ဂျပန် တရုတ်..ဖြစ်မယ်။
ဒေါင်းအလံနဲ့ ကျောင်းသားလေးထိသွားပြီ အမရယ်..
ဆေးရုံကားလည်း မရှိ. စစ်ကားတွေဘဲ ရှိတယ်..
၈၈ တုန်းက ကျနော့ အကိုကြီးကြုံဖူးတယ်။
မျက်ရည် ကျငိုတဲ့ သံ
" အမလေး အမရယ်...
ဒီလိုဘဲ ကြည့်နေကြတော့ မလားအမ…
တခုခု လုပ်ကြပါဦး..မျက်ရည်ယိုဗုံးငွေ့ တွေ မှောင်ပိတ်..
ကျနော်တို့ဘုန်းကြီးတွေ သေကုန်ပြီ..
လုံထိန်း သံဒုတ်တွေနဲ့ အသေရိုက်နေပြီ..
ပြောရင်း သူက ငိုချတယ်.။
" သားရယ် မငိုပါနဲ့ 
ဒို့ အားလုံး ကျွန်သဘောက်ဘဲ..
ရဲရင်သူတွေ အသက်စွန့် တယ် တိုင်းပြည်အတွက်..
“ကဲ အမ ရေ..ကျနော်တော့ ရပ်ကြည့်မနေနိုင်ဖူး..
ကျနော် ယောက်ျားပါ အမ..
မသေရင် ပြန်လာ..ကျနော် လိုင်းပေါ်တက်လာမှာပါ..
မတွေ့ တော့ရင်တော့ ကျနော် သေပြီသာမှတ်
ကျနော် အတွက် မစိုးရိမ်နဲ့ ..
လွတ်လပ်မှသာ အမျှဝေ..ကျနော် ဒီနားမှာ ဘဲရှိနေမှာပါ”
အဲဒီနေ့ က စ..
မသဒ္ဓါ ဒီကလေးကို မတွေ့ ရတော့ပါဘူး..
နေ့ တိုင်း online မှာ..
သူလာမလား ရှာတာ ၂နှစ်ကြာခဲ့ပြီ။
သူ သေသွားတာ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ..
အဖမ်းခံရ..ရိုက်နှက် စစ်ဆေးရင်း သူမသေပါစေနဲ့ 
အချုပ်ကျ..ထောင်ထဲ ရောဂါရ မသေပါစေနဲ့ ..
သူ ကတော့ ပျောက်နေဆဲဘဲ..
မလာတော့ မှန်းသိနေလည်း မျှော်နေဆဲ။။
သူ ဘယ်သူလည်း..သူဘယ်အရွယ် လည်း
..သူ့ မိဘတွေ မှသိရဲ့လား..
ပြန်တွေ့ မတွေ့မသေချာပေမဲ့..
မသဒ္ဓါ အမျှမဝေသေးပါဘူး မောင်ငယ်..
မသဒ္ဓါ (၉။ ၂၈။၂၀၀၉)
တကဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ..သူပေးတဲ့ live သတင်းတော်တော်များများ မသဒ္ဓါ c box တွေ မှာ လိုက်တင်ပေးပါတယ်။ အဖမ်းခံရင်..ထောင်နှစ်ရှည်ကျမှာ သိပေမဲ့ ရဲဝံ့စွာ သူမကြောက်ပါဘူး။ သေနတ်ထိပြီး နာကြင် သွေးပျက်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးထဲ..တခုခု ကူညီိပေးဖို့ခဏ ဆိုပြီး သူ ထသွားလိုက်တာ..သူ့ ကို ပြန်မတွေ့ ရတော့ပါဖူး။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အမည် မသိ ..အာဇာနည် မောင်ငယ် တဦးအတွက်..မသဒ္ဓါ စိတ်ပူပါတယ်.
မောင်လေးငယ်...မကြီး ဒီနေရာမှာ စောင့်နေပါတယ်။ ဒီကဗျာ ဖတ်မိ..သူရှိနေသေးရင် ဆက်သွယ်ပေးပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 7:45 AM0comments Links to this post
မိတ်ဆွေကောင်းတို့ ၏ မေတ္တာ ဂရုဏာ
အဖေဖို့မပြင်နဲ့ မအိပ်ချင်ဘူး..
ကြွက်တွေ မြည်သံကြားတဲ့ သံတိုင်ခန်းမှာ
အဖေ့ ယောင်းယင်း သူငယ်ချင်းတွေ..
အဖေ အရွယ် အစွယ်ကျွတ်ကျားအို..
လူ့ အခွင့်အရေး မရ..
သေချာတယ် သူတို့ လည်းလွမ်းနေမယ်။
ဒုက္ခထဲမှာ မှ ရခွင့် ကြုံ
လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ပြန်လွတ်လာသည့် မကွေးတိုင်း ပခုက္ကူမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်ဒီ) မြို့နယ်စည်း ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှိုင်အေး၏
သူငယ်ချင်းကောင်းဟူသည်..အခက်ကြုံမှ တွေ့ စမြဲ…ခင်ပြီးရင် တသက်တာစွဲမြဲတယ်။..စစ်မှန်သော သွေးသောက်ရောင်းရင်း..ပိုနီးတတ်တယ်..ညီရင်းနှယ်သို့ 
သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 25 ရက် 2009 ခုနှစ် 12 နာရီ 01 မိနစ်
မဇ္ဈိမ (ချင်းမိုင်)။ ။ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့ အကျဉ်းထောင်မှ ယခုလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြန်လွတ်လာသူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦးက ထမင်းစားတိုင်း ထောင်တွင်း၌ ကျန်ရစ်ခဲ့သော လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကို သတိရနေသည်ဟု ဆိုသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:06 AM0comments Links to this post
ထိတ်လန့် ဖွယ်ရာ စကားနဲ့ ကြိုဆိုတယ်။။
“ ဟေ့ လာကြ ၀ိုင်းကြ.
ကြောက်လန် စွာဖြင့် ဤဘုရင်..
ထို ဓါးပြရွာက ဖဲကြဉ်
များမကြာခင်..ရွာ တစ်ရွာသို့ အ၀င်..
စမ်းကျရေသို့အေးသော အသံတစ်သံ
“ ကြိုဆိုပါတယ်အသင် မင်းကြီး..
ရှင်ရသေ့ များ ဆွမ်းခံသွား..
ယုတ်မာသူ နှင့် ယဉ်ကျေးသူ
ညီရင်းအစ်ကို ကျေးသား ပျိုသည်
ဤ သို့ ဤနှယ်..
အို မိတ်ဆွေတို့ 
ကျွန်ုပ် နှင့် သင်.
တခရီးနှင်..ဒို့ လျှင် မြန်မာဖြစ်တော့၏။
ဘာသာကို ဖျက်ဆီး..သူယုတ်ကြီး ဟု.
သင်သည် ရာဇ၀င် ထိုးမည်လော..
သူတပါးတို့ ၏ မျက်ရည်..သင်ခြေဆေးမည်လော
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:02 PM0comments Links to this post
ငါ့မြေးလဲရင် အဖွား ထူမယ်..သား မပူနဲ့ 
အဖွားပေါင်ပေါ် ထိုင် တီတီတာတာပြော
ကကြီး ခခွေး..ကျောင်းစာဆို ထူးချွန်တဲ့မြေး..
အဖွား ဂုဏ်ယူရတဲ့ မြေး..
ဂုဏ်ထူးများစွာနဲ့(၁၀)တန်းအောင်..
ဖြစ်လာခဲ့တာ သူ ပိသုကာအင်ဂျင်နီယာ
ပြင်သစ် စကားပြောသင် ဆရာ..
အညွန့် အဖူးဝေတဲ့ ကလေးငယ်.
နောင်တစ်ခေတ် အတွက် တက်လူငယ်။
ကံမကောင်းစွာ လူဖြစ်တာ နအဖခေတ်
၁၉၉၆ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆိုပြီး
၂၀၀ရ ရွှေဝါရောင်မှာ..သံဃာကို ကူလို့ 
ခုတော့ ဦးခေါင်းရိုက်တဲ့ ဒဏ်ရာ
ဦးနှောက်ထိ..အာရုံကြော ထိလို့ 
ရုံးချိန်းဆို ထမ်းစင်နဲ့ မ..
လူတွဲ မ ကာချ..
သူ့ ဇနီးသည် အေးမြနန္ဒီလည်း..
မိသားစု ရဲ့အဝေးဆုံး တနေရာ..
တိုင်းပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးမှု တဲ့..
မြေးလေးရေ လူလေး မျိုးရန်နောင်သိမ်း..
အဖွား လက်ကို ဆွဲကိုင်မ..
ကဲ မတ်တတ် ကြိုးစားပြန်ထ။
မသဒ္ဓါ ( ၉။၂၃။၂၀၀၉)
မြေးအပေါ်ချစ်သော အဖွားနဲ့ မြေးငယ် ကိုမျိုးရန်နောင်သိမ်းတို့ အတွက်..
Myo Yan Naung Thein, 34 years of age, graduated Architect, French Language Instructor, Tourist Guide, and Former P.P is one of the student leaders with his firm determination in restoration of democracy in Burma.
Due to his leadership role in the 1996 December Student Demonstrations he was sentenced to prison for7years by the military government in 1997 under Section 5/j of the Penal Code completing his sentence on9October 2002. He is one of the leading members of the 88-generation student and he was working for democracy of Burma foravery long time until his re-arrest in 2007.
After his release in 2002 he studied French becomingaFrench teacher, he is very fluent in English, French and Spanish. He worked asatourist guide and his wife Aye Mya Nadi isalinguist, very fluent in Italian.
Myo Yan Naung Thein always playedavital role in the struggle for freedom in Burma. He actively participated in the 2007 Saffron revolution. Because of his political and democratic activities the military government constantly monitored him very closely.
On 14th December 2007 about 20-30 policemen, soldiers and military intelligences raided Myo Yan Naung Thein’s house re-arresting him apparently, for being linked to activists who filmed the September'07 protests and for speaking to the exiled media.
Presently he is at Thandwe prison in western Burma miles away from his hometown, serving his2years sentence under Section 505/b of the penal code dictated at Pabedan Township Court and Insein prison special court on 13 November 2008.
Due to this stressful situation his mother in her 70s is bed ridden diagnosed with high blood pressure andaheart condition. She anxiously expects the day of her son’s release from prison. His wife Aye Mya Nadi was threatened with arrest.
On 28th January 2008, his mother saw him for the very first time after6weeks in detention,aheart-breaking scene when she saw him. The inflicted torture by the Special Police and Swan-Ar-Shin (government sponsored militias) during detention has caused him paralysis along his left side body unable him to walk properly. Onceahealthy and fit person he has becomeadependable person needing aid for walking. His crime, beingafreedom fighter, making himaprisoner of conscience.
In Burma, time sentences are life and death. There is no rule of law and the laws are dictated by the generals to suit their moods.
Myo Yan Naung Thein is in urgent need of consistent neurologist treatment. During detention following his arrest, he was tortured by Special Branch and Swan-Arr-Shin junta sponsored militias. He was severely beaten suffering head injuries. His nervous system appears to have been affected, as he is suffering from paralysis along his left-hand side of his body.
On 29 May 2008 his brother Myo Thein reported to the media that Myo Yan Naung Thein’s medical condition was rapidly deteriorating. He was vomiting daily and could not sleep. He required assistance to walk to the visiting room to see his family on visiting days.
In May 2008 Myo Yan Naung Thein requested the prison authorities to allow him to seeaneurologist instead he was punished for his request with two weeks solitary confinement in an Ayutheit cell, where prisoners with mental problems are normally kept. He was reportedly given medication foramental health problem, even though his problem was neurological not mental. Whilst he was in that cell he had to sit on the wet floor as the roof of the building was not properly repaired following the damage caused by the Nargis Cyclone.
As Myo Yan Naung Thein is unable to walk he was brought to court onastretcher forabrief court appearance on 26 June, he remained in custody.
On 27 August 2008, his brother Myo Thein reported to AAPP, Myo Yan Naung Thein's trial progress and that his health situation was being treated at the hospital.
On 13 May 2009 Myo Yan Naung Thein’s health situation worsen and no medical treatment was received for more than two months since he complained about his deteriorating health situation.
His legs are stiff and cannot bend at all that people have to carry him to move around. This is the new development of health build up apart from his neurological problem. He cannot sleep nor eat well as consequence, he has lostalot of weight.
According to the neurologist, he needs to take medication regularly and treat his illness appropriately.
"Whenever international attention divert from these vulnerable political prisoners, they are treated very inhumanely [by the junta] and medical treatment is ignored" said Kyaw Lin Oo, Director at the Burma Democratic Concern (BDC) in Thailand.
“I am very sad to learn that in Than-Dwe prison, there is no doctor or medics to look after prisoners. I am sure that this is the regime's systematic attempt to kill political dissidents”, said Myo Thein, Director at the Burma Democratic Concern (BDC) in United Kingdom.
Visiting him is very difficult for the family members due to natural barriers. By coach it takes2days to get there, roads are very bumpy and dangerous as they are built through mountains and jungles. Bus fares are very expensive and trips are risky.
“The reason the military junta send political prisoners to remote prisons is to extend punishment onto political prisoners' families”, said Khin Maung Win, Director at the Burma Democratic Concern (BDC) in United States.
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:11 AM0comments Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုသမိုင်း (အောင်ထွန်း)
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုသမိုင်း (အောင်ထွန်း) ရဲ့ စာအုပ်ဖတ်ချင်ရင်.ဒီမှာ download ယူပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:30 PM0comments Links to this post
၁၅ ရာစုက အင်္ဂလန်
ဟင်နရီ အမှတ်(၈) ဘုရင် ပေါ့။
သားလိုချင်လို့သမီးမွေးတဲ့ မယားကိုကွာ
Church of England ဘာသာ အသစ်ထွင်ခဲ့တယ်။
ဘွဲ့ မက် သာသနာပိုင် လုပ်ချင်တဲ့သူ…မျက်စိမှိတ်
မမှန်တာတွေ့မကြားချင်ယောင်ဆောင် နားပိတ်
ကြွေးတာစား ချေးများနဲ့ ..
ဥပဒေအထက် နအဖ ရှိတယ်..
သံဃာစင် အထက် နအဖ ရှိတယ်။
အင်တာနက် IT တတ် ဘုန်းကြီး.ထောင်ကျမယ်။
လမ်းဘေးကကြံဖွတ် ရုတ်လာတဲ့ ထမီစုတ်
တကာမ နဲ့ စွပ်စွဲ
ကြုံရာပုဒ်မ ပလွတ်ရွှတ်တ ပါးစပ်ထဲ
စာသင်ကျောင်း စာချကျောင်း..ကြံဖွတ်တွေ စောင့်နေဟဲ့
ကိစ္စမရှိ..နအဖသာ မဆင်းရစေနဲ့ 
ဘုန်းကြီးအိုတွေ ကို ရှေးရိုးပြဆွဲ
မယားငယ်ချွဲ နအဖ ချွဲပြတဲ့အခါ
နအဖ ဘဲ င့ါတကာ..
မင်းတို့ လက်ထက်မှဘဲ ငါကိုယ်တော်
လက်မှတ်တွေ ထိုးပါဆို ထိုး..ဘုရား စည်းတွေ ချိုး..
သစ်သားရိုးပါမှ သစ်တောပြုတ်စေတာ ပုဆိန်ရိုး..
သြ၀ါဒစိရိယ..ဘုန်းဘုန်း ဆရာတော်တို့ ရယ်..
ရာထူးရ မှ ဘုန်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး..
ဘုန်းဘုန်း ငယ်စဉ် ပဥ္ဗှင်းဘ၀..
ငယ်သူတွေ ဘ၀ တွေးစာနာ။
ပဉ္ဗလက်ဆရာ ဂမ္ဘီရ ယတြာ..
ကျမ တို့ ၏လက်ထက်
ရှင်အရဟံ လို သာသနာပြုမဲ့သူမရှိဘူး.
ရှင်ဒီသာပါမောက္ခ လို သံတမာန်ရေးကျွမ်းကျင်သူမရှိဘူး
ပင်လေးပင်ရှင်လေးပါး လို ဆုံးမစာရေးမဲ့သူမရှိဘူး။
ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ လို သွန်သင်မဲ့သူမရှိဘူး။
သင်္ဂဇာဆရာတော် ဘုရားလို နားချတတ်သူမရှိဘူး.
ဦးဝိစာရလို အမျိုးချစ်သူ မရှိဘူး.
ဦးဥတ္တမ လို ရဲရဲတောက်သူမရှိဘူး.
နအဖ ကပ်တဲ့ သွေးစွန်း ဒါနကို လက်ခံတာထက်စာ
ပိုးသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ ရှင်တွေ ထက်စာ
သစ်တပင် ၀ါးတပင်..တစပြင် မှာ သီတင်းသုံးတဲ့
နေလောင် ဖြုရော် ပိတ်ကြမ်းသင်္ကန်းဝတ်
သဒ္ဓါ ကြည်ဖြူ တောင်သူ၏ မုရင်းဆွမ်းကြမ်းကိုလက်ခံ
၀ိနည်း ဂုဏ်ရည် သိက္ခာမှာ
ပုဂံခေတ် မွန်ဂိုနယ်ချဲ့အောက် သာသနာမပျက်
အင်းဝခေတ် ကွေ့ ရှမ်းလက်အောက် သာသနာမပျက်
အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့အောက် နှစ် ၆၀ ကျော် သာသနာမပျက်
မြန်မာ စစ်စစ် စစ်တပ်အုပ်မှဘဲ သာသနာပျက်တယ်။
ပြည်သူ့ အတွက် ကိုယ်စားမကျ
နှစ် ၂၅၀၀ ရဲ့ သိကြား သာသနာ..
နောင် နှစ် ၂၀၀ သာသနာစစ် ကျန်ပါ့မလား။
၀ိသုနြေ္ဓ တောင် ရင်လေးလွန်းလှတယ်။
စစ်ဘုရင် အာသောက လက်ထက် ရှန်းရှန်းတောက်ပေတဲ့
နအဖ ခြေထောက်အောက် ပွန်းပဲ့ရသော သာသနာရယ်။
မသဒ္ဓါ ( ၉။၂၄။၂၀၀၉)
သာသနာစစ် ကို သားမြေးတွေ အတွက် ခြေရာချန်ခဲ့ပါ ဆရာတော်များဘုရား ။ ဘုန်းကြီးလည်း ပျံလွန်သော အခါ ဘာမှ သယ်မသွားနိုင်ပါ။ နအဖ ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ နာမည်ကြီးချန်မသွားခဲ့ပါနဲ့ ဘုရား ။အမှန်နဲ့နေ..သာသနာကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:13 AM0comments Links to this post
ဒေါင်းကလောင်ရှင်..သွေးနဲ့မှင်တို့ ..သမိုင်းဆက်ရေးစို့ 
နှုတ်မြွက် တစ်ရာ..စာ၏ တစ်လုံး..
သမိုင်းမတိမ်အောင် သီကုံးမိလို့ 
ပေးရတဲ့ ထောင် ၁၁ နှစ်..
သင် သည် အာဇာနည်ဖြစ်တယ်။
မြန်မာကျောင်းသားများ၏ လှုပ်ရှားမှုသမိုင်း စာအုပ်
မြန်မာများရဲ့ လက် မှာ..
on Line စာမျက်နှာပေါ်မှာ..
Blog များစွာ အတွင်းမှာ
ထင်ရှားတဲ့ သင်၏ လက်ရာ။
ကျန်နေ ဦးမော့နေသည့် သင့်အမည်..
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်
ကမ္ဘာတဝှန်း နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်ခြင်းခံ စာရေးဆရာများ၏ဆု
ဟယ်မန်၊ ဟန်းမတ်ဂရန့်ဆု (Hellman/Hammett Grant) ကို
၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့သူ
အသင် ကို မြန်မာလူထု ချီးမြှင့် ဂုဏ်ပြုတယ်။
လွတ်မြောက် ချိုးဌက်..မိုးထက်သို့ ပျံ
မရပ်တန့် တဲ့ ဒေါင်းကလောင်တန်..
မပြီးသေးသော သမိုင်း၏ အဆက်
မသဒ္ဓါ (၉။၂၃။ ၂၀၀၉)
လွတ်မြောက်သော မောင်ငယ် ကိုအောင်ထွန်းအား ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျမ်းမာချမ်းသာ မပြီးသောသမိုင်းကို ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 23 ရက် 2009 ခုနှစ် 22 နာရီ 00 မိနစ်
“၁၈ ရက်နေ့က ပြန်လွတ်လာတာပါ။ သာယာဝတီ ထောင်ကပါ။ သူက ၉၈ ကနေ ထောင်ကျတာဆိုတော့ ၁၁ နှစ်ပေါ့။ အခု သူ့အိမ်မှာပါပဲ” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း AAPP-B အတွင်းရေးမှူး ကိုတိတ်နိုင်က ပြောသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:49 AM 1 comments Links to this post
သီပေါကို မင်းတင်ဖို့ 
ရှိရှိသမျှ သားတော် သမီးတော် ဆွေမျိုးတော်..
သားတော်သမီးတော်တို့ ကို သတ်ဖို့ ဖမ်းတဲ့အခါ..
မက္ခရာ မင်းသား နဲ့
ညီတော် နှမတော်တွေ အတွက်..
ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစား
ရာဇ၀င်မှာကျန်တဲ့ အမည် တစ်လုံး..
သမိုင်း တွင်သော သူရဲကောင်းစစ်သည်။
ကျနော် ကိုညီညီအောင် (သို့ မဟုတ်) ကိုကျော်ဇောလွင်
ဆိုတဲ့ အမေရိက မှာ..
နအဖ မျက်မုန်းကျိူးတဲ့ ကျနော့မိသားစု
၅ ယောက်သော မိသားစုဝင်..မှန်သမျှ
အမေ ဒေါ်စန်းစန်းတင်က မိတ္ထီလာထောင်
ယောက်ဖ ကိုချစ်ကိုလင်းက ပခုက္ကူထောင်
ကိုကျော်စွာဌေး က ဗန်းမော်ထောင်
၀မ်းကွဲ ညီမလေး မသက်သက်အောင်က မြင်းခြံထောင်
မနိုးနိုး က မအူပင်ထောင်.
အပြစ်ပုံ ထောင်ချ..ဆွဲချတာ အမြင်ကပ်ပုဒ်မ..
အပြင်ဆီမှာ အဖေမဲ့ အမေမဲ့
၉ နှစ် ရ နှစ် နဲ့ ၂ နှစ် ကလေးတွေ
ကြီးစွာသော သောကပြွမ့်း ဒုက္ခ…
အသက် ၆၀ ကျော် အိုကြီးအိုမ
ကျမ်းမာရေး တစစ..ချို့ ယွင်းလာတဲ့အမေ..
ကျနော် စိတ်ပူတယ် အမေရယ်....
ငါသည် ကြောက်ရွံ့ အတွေးနဲ့ လူမဟုတ်။
သေလည်း ရင်ကော့ဘဲ သေမယ်။
မသဒ္ဓါ ( ၉။ ၂၃။၂၀၀၉)
ဂုဏ်ယူပါတယ်။..ကိုညီညီအောင် ခေါ် ကိုကျော်ဇောလွင် ..အာဇာနည်...မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်.
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:23 AM 1 comments Links to this post
ခြေရာနင်းမဲ့ သမီးလား..အဖေ နာမည်ရင်းမဲ့သမီးလား.
မုန်ယိုတဲ့ ဆင်ကြီး ထူးခတ်ရဲကြသလား..
ကြောင် ကို ခြူဆွဲရဲသလား။
ဒူးထောက် ခေါင်းငုံသျှိူ ခြေကိုဘဲ နမ်းတော့မလား.
အသားနံ့ ကလေးဘဲရရ အရိုးအရင်း ကိုက်ချင်ကြသလား..
သဲတရှပ်ရှပ်သော်လည်း .၀က်သားတုံးပါဘဲ ရောင့်ရဲနေသလား..
အဖေ မျက်နှာမငယ်အောင် ထောင်ထဲ နှစ် ၂၀
ဒီလိုရဲရင် တော့ လုပ်ပြ..
လက်ခုတ် ဖြောင်းဖြောင်း တီးပြလိုက်မယ်။
ဘယ်သူဟာ အဖေတူ သမီး..တကမ္ဘာလုံးသိတယ်။
ဘယ်သူကို ဘယ်နှစ်မှတ်..ပွဲကြည့်သူ ချီးမြှင့်တတ်တယ်။
အာဏာ အနံ့ ကလေး သင်းတဲ့အခါ
၀န်ပြုတ် အမျိုးတွေ သွားရည်ကျ..
ခါတော်မီ ပါတီ ထောင်ကြတယ်။
ဖေဖေ့ သမီးတွေ ရှေ့ တန်းက တိုက်ပြမယ်တဲ့..
ပုံပြင် ဆုံးအောင် ကြည့်
လိပ်နဲ့ ယုန် အပြေးပွဲက
ဒီလို ပူးသတ်ပြီး ခေတ်ကို ပြောင်းကြမတဲ့…
၁၉၉၀ က ပေးပြီပေါ့..
ကိုကြီးနု သမီး ကျ ပေးမယ်တဲ့လား..
နအဖ လျှာ အရိုးမရှိ..
၂ခါ အလိမ်ခံ..ကိုယ်ညံ့တာ ၀န်ခံ
စစ်သားက.. တရားဝင် တမတ်..
ကြံ့ဖွတ် လူယုတ်တွေ မဲခိုးမယ် တမတ်..
မဆလ ပြုတ်တွေက ပြား ၂၀
တသီးပုဂ္ဂလိက တွေက သုံးပြား
အေးလွင် နဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားအတုက တပြား
ရှိစုမဲ့ ကျန်တဲ့ တပြားက ၀န်ကြီးချုပ်နု သမီး..
ဆုံး သွားတာက ဦးနုရဲ့ နာမည်တစ်လုံး
အသံ သာရှိ..အဆန်မရှိ တော့တဲ့အခါ..
ထသွားမှ အကျိုးကြီး မှန်းသိ
“ &&& XXXXX
ငါ့သမီး..နင် ငါ့ နာမည် ဖျက်တယ်..”
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းများ၏ သမီးများ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ပါတီထောင် Tuesday, 15 September 2009 17:42 အောင်သက်ဝိုင်း
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးခေတ် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ၃ ဦး ၏ သမီးများက “ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ” အမည်ဖြင့် ပါတီတရပ် ဖွဲ့စည်းပြီး လာမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ တွင် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနု၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်မြသန်းသန်းနု၊ ၀န်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးဗဆွေ၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်နေရီဗဆွေ၊ ဒု ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးကျော်ငြိမ်း၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်ချိုချို ကျော်ငြိမ်းတို့သည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးများအဖြစ် ဆောင်ရွက် ကြမည်ဖြစ်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဦးသုဝေ က ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊နတ်မောက်လမ်းရှိ Dolphin Resturant တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် “၂၀၁၀ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲ”တွင် ဦးသုဝေက ထိုသို့အတည်ပြုပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆွေးနွေး ပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူ တဦးက ပြောသည်။ ယင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ဦးသုဝေနှင့် အမျိုးသားရေး ဦးဝင်းနိုင် တို့က ဦးဆောင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရုံနဲ့ ဒီမိုကရေစီရမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီ အပြည့်အ၀ ရတဲ့ အထိ ဆက်ပြီး လွှတ်တော်ထဲကနေ လုပ်သွားရမယ်။ ကျနော်တို့ အာဏာရလာရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သား တွေလွှတ်ပေးဖို့ကိစ္စတွေအပါအ၀င် ပြည်သူ့ဆန္ဒတွေကို ပြည့်ဝအောင်လုပ်လာနိုင်မယ်လို့ ဦးသုဝေ ကပြောတယ်”ဟု ထို အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သူ နိုင်ငံရေးသမားတဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော စစ်အာဏာရှင်စနစ်မှ ခေတ်သစ်၊ စနစ်သစ် သို့ ကူးပြောင်းမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ ပါတီရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး၊ ဂိုဏ်းဂဏ၀ါဒ ခွဲခြားမှုများကို ပယ်ဖျက်ပြီး ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဒီမိုကရက် တစ်ပါတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦသုဝေက ပြောသည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
အမျိုးသားရေး ဦးဝင်းနိုင်ကလည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများအနိုင်ရရန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါး ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး၊မ၀င်ရေးအငြင်းပွားနေခြင်းကြောင့် ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများအကြားတွင်စည်းလုံးမှုပြိုကွဲသွားပြီး အားအင်ချိနဲ့နေသဖြင့် အစိုးရ အင်အား ကောင်းလျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ စစ်တပ်သည် လွှတ်တော်တွင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း အမြဲတမ်း တရားဝင်နေရာ ရရှိနေမည် ဖြစ်သည့်အပြင် အစိုးရ၏ နာမည်ခံပါတီများကလည်း ရွေးကောက် ပွဲဝင်ပြီး လွှတ်တော်တွင်နေရာ ရရှိရန် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ရွေးချယ်ခံရရန် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများအတွက် လွှတ် တော်တွင် အမတ်နေရာ အနည်းငယ်သာရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမည်ဆိုသော အတွေးအခေါ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ကြောင်း ဦးဝင်းနိုင်ကဆိုသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းသစ်မှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပသည့်တိုင် နိုင်ငံ၏ အုပ်ချူပ် ရေး တာဝန်များကို စစ်တပ်နှင့် နိုင်ငံရေးသမားများအကြား အာဏာခွဲဝေမှု (Power Sharing) စနစ်ဖြင့် ခွဲဝေအုပ်ချုပ်သင့်ကြောင်း ဦးဝင်းနိုင်ကအကြံပြုသည်။
“၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို မလုပ်နဲ့လို့မပြောဘူး။ ဒါပေမယ့် Power Sharing နဲ့ နိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာတွေကို ခွဲဝေယူရမယ်။ရွေးကောက်ပွဲအပြီးဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အစိုးရမှာ အာဏာကို စစ်တပ်က ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားက ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း။ ဒုတိယ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အစိုးရမှာ အာဏာ ကို စစ်တပ်က ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားက ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း။ တတိယရွေးကောက်ပွဲ အပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အစိုးရမှာ အာဏာကို စစ်တပ်က ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ နိုင်ငံရေးသမားက ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ခွဲဝေပြီး တဖြည်းဖြည်းစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှုကို လျော့သွားမှ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အသွင်ကူးပြောင်း နိုင်မယ်”ဟု ဦးဝင်းနိုင်က ပြောသည်။
အမျိုးသားရေးဦးဝင်းနိုင်၏ အဆိုပြုချက်သည် စဉ်းစားသင့်သော်လည်း ၁၉၉၀ ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အမျိုသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် အနေဖြင့် ထိုသို့သော Power Sharing စနစ်ကို လက်ခံလိမ့် မည်မဟုတ်ဟု ထင်မြင်ကြောင်း လေ့လာသူများက ပြောဆိုသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူမတို့ဟာ အာဏာအတွက် အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်သူ လူထုကိုကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိအောင် တိုက်ပွဲဝင်နေတာဆိုတာ ကို အမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်။ ဒီပြော ဆိုချက်အရဆိုရင် ဦးဝင်းနိုင်ရဲ့ Power Sharing စနစ်ကို NLD က ဘယ်လိုမှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင် ပါ တယ်”ဟု ရန်ကုန် အထက်တန်းရှေ့နေ တဦးက ပြောသည်။
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသုဝေကမူ အာဏာရရှိရန် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြပြီး လွှတ်တော်တွင်ကျန်ရှိသည့် အမတ်နေရာ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများက ရနိုင်သမျှ များများရရန် ကြိုးပမ်းရေးသည် ပထမဦးစား ပေးလုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟု ပြောဆိုသည်။
“ဒီမိုကရေစီနဲ့ မညီတဲ့ဥပဒေတွေကို နောင် ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ အာဏာရလာရင် ပြန်လည်ပြင် ဆင်ဖို့ လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းမယ်။ အရေးကြီးဆုံးက အာဏာရအောင် လုပ်ရမယ်”ဟု ဦးသုဝေ က ပြောသည်။
ဦးသုဝေ၏ ပြောဆိုချက်သည်လည်း လက်တွေ့တွင် အမှန်တကယ်ဖြစ်လာရန်မလွယ်ကူဟု ရန်ကုန် သတင်း ထောက်တဦး က ဝေဖန်သည်။
“ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြန်ပြင်ဖို့ဆိုတာက လွှတ်တော်ရဲ့ အမတ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ထောက်ခံပြီး ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံးရဲ့ မဲဆန္ဒကိုရရှိမှ ပြင်ဆင်လို့ရမယ်လို့ ဥပဒေမှာ အတည်ပြု ပြဌာန်းထားပြီးသား။ နောက်ပြီး လွှတ်တော်ရဲ့ အမတ်နေရာ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား တွေက ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မရနိုင်ဘူး”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင် အမှုဆောင် ၁၇ ဦး၊ ဗဟိုကော်မတီဝင် ၁၀ ဦးပါဝင်ပြီး ပါတီဝင်များကို မြို့ကြီးများနှင့်
နယ်ဒေသများတွင်ဖြန့်ကျက်ထားပြီးသားဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးရဲထွန်း( ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲစဉ်က အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းခဲ့သည်ဆိုသော ဦးချန်ထွန်း ၏ သား) က ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် ကနေဒါအခြေစိုက် ကျုံယွမ်ဦးကျော်မြင့်၏ UDP ပါတီနှင့် မည်သို့မျှ ဆက်စပ်ခြင်း မရှိသကဲ့သို့ ငွေရေးကြေးရေးလည်း ထောက်ပံ့မှုမရှိကြောင်း ဦးသုဝေက တရားဝင် ရှင်းလင်းပြောသည်။
ယမန်နေ့က ပြုလုပ်သော ဆွေးနွေးပွဲတွင် NLD ပါတီက မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တစုံတရာမှတ်ချက် မပေးကြဘဲ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုသာ အာရုံစိုက်သင့်သည်ဟု ဦးသုဝေနှင့် ဦးဝင်းနိုင်တို့က ဆိုသည်။
ထို၂၀၁၀ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲသည် ဦးသုဝေနှင့် အမျိုးသားရေး ဦးဝင်းနိုင် တို့က ဆွေးနွေး တင်ပြ ခြင်းဖြစ်ပြီး ရဲအထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းထောက် ၃၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ http://www.irrawaddy.org/bur/index.php?option=com_content&view=article&id=1811:2009-09-15-10-43-26&catid=1:news&Itemid=2
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 7:53 AM0comments Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုသမိုင်း (အောင်...